raad iyo sahan
Ugu Weyn Ee Amniga Raadinta iyo Sahaminta
Raad-raadis waxaa loola jeedaa habka ururinta macluumaadka ku saabsan nidaamka bartilmaameedka. Waa tallaabada ugu horreysa ee weerarka ee uu weeraryahanku isku dayo inuu wax ka barto sida ugu macquulsan bartilmaameedka si uu u helo hab uu ugu soo xadgudbo nidaamka.
Waxaa jira laba nooc oo raad raadin ah:
Raad-qaadid aan toos ahayn macnaheedu waa ururinta macluumaadka iyada oo aan toos loola macaamilin bartilmaameedka. Raad-raadinta noocan ah waxaa la isticmaalaa marka xog-uruurinta aan la ogaan karin bartilmaameedka.
Raad-raadinta firfircoon macnaheedu waa ururinta macluumaadka iyadoo si toos ah loola fal-galayo bartilmaameedka. Raad-raadinta noocan ah waxaa jirta fursad ah in bartilmaameedku ka war helo ururinta macluumaadka.
Weeraryahannadu waxay adeegsadaan raadad si ay u ururiyaan macluumaadka soo socda:
Whois iyo diiwaanka DNS
Nidaamyada hawlgalka serverka
Ujeeddooyinka raad-qaadista waa:
Baro booska amniga Falanqee qaabka amniga ee bartilmaameedka, raadso daldaloolo, iyo abuur qorshe weerar.
Aqoonso aagga diiradda la adeegsanayo aalado iyo farsamooyin kala duwan, soo koob cinwaannada IP-ga ee kala duwan.
Raadi jilicsanaanta Isticmaal macluumaadka la ururiyey si aad u ogaatid daciifnimada xagga amniga bartilmaameedka.
Khariidada shabakadda Sawir ahaan matala shabakadda bartilmaameedka oo u isticmaal hage ahaan inta lagu jiro weerarka.
Sida iyo Halka Loo Uruuriyo Macluumaadka
Waxaa jira qalab fara badan iyo ilo intarnetka ah oo aan u adeegsan karno soo uruurinta macluumaadka ku saabsan bartilmaameedkeena.
Mashiinka Raadinta iyo Kheyraadka internetka
Mashiinnada raadinta ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro macluumaadka ku saabsan urur bartilmaameedka. Natiijooyinka raadinta waxaa ku jiri kara macluumaad ku saabsan shaqaalaha hay'adda la bartilmaameedsanayo, intranet, bogagga soo galida, iyo macluumaad kale oo waxtar u yeelan kara kuwa wax weeraraya.
Hal dariiqo oo loo ururiyo macluumaadka iyadoo la adeegsanayo makiinadaha wax lagu raadiyo ayaa ah iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka jabsiga google.
Jabsashada Google waa farsamo ay weerarayaashu u adeegsadaan inay ku sameeyaan baaritaan adag oo ay kala soo baxaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan bartilmaameedyadooda. Waxay ku lug leedahay adeegsiga tiro ka mid ah hawlwadeennada raadinta iyo dhisidda weydiimo adag. Hawl wadeyaasha loo adeegsado jabsiga Google waxaa loogu yeeraa dorks.
Whois, IP Geolocation, iyo Su'aalaha DNS
Whois waxaa loola jeedaa hab maamuus weydiin iyo jawaab taas oo loo adeegsado dib u soo helida macluumaadka ku saabsan ilaha internetka ee loo xilsaaray.
Macluumaadka Whois waxaa ku jira macluumaadka shakhsiyadeed ee milkiileyaasha domain waxaana ilaaliya Diiwaangelinta Internetka ee Gobollada.
Waxaa jira laba nooc oo moodello xog ah oo jira:
Khafiif ah yaa
Thick whois waxaa ku jira dhammaan macluumaadka dhammaan diiwaan-geliyeyaasha xogta cayiman. Khafiifka ah ayaa ka kooban macluumaad kooban oo ku saabsan xogta la cayimay.
Natiijooyinka weydiinta Whois sida caadiga ah waxaa ka mid ah:
Faahfaahinta milkiilaha Domain
Kala duwan Net
Abuurid iyo taariikhihii ugu dambeeyay ee cusbooneysiinta
Diiwaan Gelinta Internetka ee Gobollada, oo ilaaliya macluumaadka keydka, waxaa ka mid ah:
ARIN (Diiwaanka Mareykanka ee Nambarada Internetka)
AFRINIC (Xarunta Macluumaadka Shabakada Afrika)
APNIC (Xarunta Macluumaadka Shabakada Aasiya Pacific)
RIPE (Xarunta Iskuduwaha Shabakada Iskuxirka Shabakada 'Reseaux IP Europeens)
LACNIC (Xarunta Macluumaadka Shabakada Latin America iyo Caribbean)
IP geolocation waxay caawisaa helitaanka macluumaadka goobta ee ku saabsan bartilmaameedka sida waddanka, magaalada, lambarka boostada, ISP, iyo wixii la mid ah. Macluumaadkan, haakarisku waxay awoodaan inay ku qaadaan weerarada injineernimada bulshada bartilmaameedka.
Raadinta DNS waxaa loola jeedaa ururinta macluumaadka ku saabsan xogta aagga DNS, oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan martigaliyayaasha muhiimka ah ee shabakadda.
Qalabka wax weydiinta ee DNS wuxuu ka caawiyaa kuwa wax weeraraya inay fuliyaan raadinta DNS. Adeegsiga aaladahaan, weeraryahanadu waxay awoodaan inay helaan macluumaad kusaabsan noocyada serverka iyo goobahooda.
Raadinta iimaylka waxaa loola jeedaa ka soo ururinta macluumaadka emaylka adoo kormeeraya sida loo diro emaylka loona kormeero madaxyada.
Macluumaadka lagu soo aruuriyey raadinta emailka waxaa ka mid ah:
Cinwaanka IP ee qaataha
Juquraafiga qofka qaata
Macluumaadka Browser iyo OS
Cinwaannada cinwaanka iimaylka waxaa ku jira macluumaad ku saabsan soo diraha, maadada, iyo qaataha. Dhammaan macluumaadkaani waa kuwo qiimo ku leh jabsadayaasha markay qorsheynayaan inay weeraraan bartilmaameedkooda.
Macluumaadka ku jira cinwaannada cinwaanka emailka waxaa ka mid ah:
Cinwaanka IP / Email ee soo diraha
Nidaamka aqoonsiga boostada
Dir oo dir shaabad
Tirada gaarka ah ee fariinta
Waxa kale oo suurtagal ah in lala socdo emaylka adoo adeegsanaya aalado raadraac oo kala duwan. Aaladaha raadraaca emaylka waxay leeyihiin awooda dabagalka emaylka iyo kormeerida madaxdooda si ay uga soo saaraan macluumaad waxtar leh. Soo diraha waxaa la ogeysiinayaa emaylka la keenayo oo uu furayo qofka loo soo dirayo.
Raadinta degelku waa farsamo macluumaadka macluumaadka ku saabsan bartilmaameedka la ururinayo iyadoo la kormeerayo bogga bartilmaameedka. Hackers waxay khariidayn karaan dhamaan shabakada bartilmaameedka iyadoon la dareemin.
Raadinta degelku waxay siisaa macluumaad ku saabsan:
Adiga oo baaraya cinwaanada websaydhka, waxaa suurtagal ah in la helo macluumaad ku saabsan cinwaanada soo socda:
Macluumaadka La Beddelay
Macluumaadka Server Server
Siyaabo dheeraad ah oo loo ururiyo macluumaadka waa iyada oo loo marayo HTML Source Code iyo baaritaanka cookie. Adiga oo baaraya koodhka ilaha HTML, waxaa suurtagal ah in laga soo saaro macluumaadka faalooyinka ku jira koodhka, iyo sidoo kale in aragti laga helo qaab dhismeedka faylka adoo u kuur galaya iskuxirayaasha iyo astaamaha sawirka.
Kukiyada sidoo kale waxay soo bandhigi karaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan softiweerka ku shaqeynaya serverka iyo dhaqankiisa. Sidoo kale, kormeerida kal-fadhiyada, waxaa macquul ah in lagu garto astaamaha qoraalka.
Waxaa jira barnaamijyo loogu talagalay inay ka caawiyaan raadinta bogga. Barnaamijyadan waxaa loogu yeeraa caarooyinka websaydhka waxayna si habeyn ah u baaraan degel iyagoo raadinaya macluumaad gaar ah. Macluumaadka lagu soo aruuriyay habkan wuxuu ka caawin karaa kuwa wax weerara inay fuliyaan weerarada injineernimada bulshada.
Websaydhka muraayadda ama boggaga internetka ayaa loola jeedaa habka nuqul ka sameynta degel. Muraayada degelka waxay ka caawineysaa ka baaraandegidda barta qadka, raadinta bogga nuglaanta, iyo helitaanka macluumaad qiimo leh.
Websaydhadu waxay kaydin karaan dukumiintiyo noocyo kala duwan leh oo iyagana laga yaabo inay ku jiraan macluumaad qarsoon iyo metadata la falanqeyn karo loona adeegsan karo fulinta weerarka Metadata Tani waxaa lagu soo saari karaa iyadoo la adeegsanayo qalab kala soocid metadata kala duwan iyo sidoo kale caawinta weerarada inay fuliyaan weerarada injineernimada bulshada.
Raadinta shabakadda waxaa loola jeedaa habka ururinta macluumaadka ku saabsan shabakadda bartilmaameedka. Inta lagu gudajiro howshan, kuwa wax weerara waxay uruuriyaan macluumaadka kaladuwan ee shabakada waxayna u adeegsadaan macluumaadka khariidada shabakada bartilmaameedka.
Baaxadda shabakaddu waxay siisaa kuwa wax weeraraya aragti ku saabsan sida shabakaddu u dhisan tahay iyo mashiinnada ay shabakaddu leedahay.
Nmap waa aalad loo isticmaalo helitaanka shabakad. Waxay isticmaashaa baakadaha IP-ga ee cayriinka ah si ay u go'aamiso martigaliyayaasha laga heli karo shabakadda, adeegyada ay bixiyaan kuwa martida loo yahay, nidaamyada ay ku shaqeynayaan, noocyada darbiga la adeegsanayo, iyo astaamaha kale ee muhiimka ah.
Tilmaamaha Nmap waxaa ka mid ah awoodda lagu baaro shabakadaha waaweyn iyo sidoo kale khariidaynta shabakadaha.
Barnaamijyada 'Traceroute' waxaa loo isticmaalaa in lagu ogaado router-yada ku socda waddada loo socdo martigaliyaha. Macluumaadkani wuxuu ka caawiyaa fulinta nin-ku-dhex-dhexaad ah iyo weerarro kale oo la xiriira.
Traceroute wuxuu adeegsadaa borotokoolka ICMP iyo goobta TTL ee cinwaanka IP si loo ogaado wadada. Waxay diiwaangelisaa cinwaanada IP iyo magacyada DNS ee router-yada la helay.
Natiijooyinka raadraaca traceroute wuxuu ka caawiyaa kuwa wax weeraraya inay soo ururiyaan macluumaadka ku saabsan topology-ka shabakadaha, router-yada lagu kalsoon yahay, iyo sidoo kale goobaha dabka laga helo. Waxay u isticmaali karaan tan inay abuuraan jaantusyo shabakadeed ayna qorsheeyaan weerarradooda.
Tallaabooyinka Tallaabooyinka Lugta
Qaar ka mid ah tallaabooyinka ka-hortagga raad-raaca waxaa ka mid ah:
Xaddidaadda marin u helka warbaahinta bulshada
Dhaqan galinta siyaasadaha amniga
Ka wacyigelinta shaqaalaha khataraha amniga
Sirta macluumaadka xasaasiga ah
Naafada hab-maamuuska aan loo baahnayn
Qaabeynta adeegga saxda ah
Warbixinnada raad-raaca waa inay ku jiraan faahfaahinta ku saabsan tijaabooyinka la qaaday, farsamooyinka la isticmaalay, iyo natiijooyinka baaritaanka. Sidoo kale waa inay kujirtaa liistada dayacanka iyo sida loo xallin karo. Warbixinadan waa in si weyn loo ilaaliyaa, si aysan ugu dhicin gacmo qaldan.
qaabka sheyga bogga selenium java
Qaabdhismeedka Tijaabada Waxqabadka leh Gatling iyo Maven
Muuqaallada Diiwaangelinta Isticmaalaha iyo Kiisaska Imtixaanka
Sida loo Aqriyo Faylasha kujira Java
Sida Loogu Daro Lakabka Cucumberka Dusha sare ee REST API ee Tijaabooyinka
Sida loo isticmaalo SQL Drop, Truncate iyo Delete Statements
Sida loo Isticmaalo CURL si loogu soo diro Codsiyada API
Qoraalka Jadwalka 'SQL Alter'